Ma laga hortagi karay Weerarkii Westgate? - Gudigga difaaca oo baaritaan Bilaabay | KEYDMEDIA ONLINE
Ma laga hortagi karay Weerarkii Westgate? - Gudigga difaaca oo baaritaan Bilaabay
Nairobi (KON) - Gudigga difaaca ee Baarlamanka Kenya ayaa lagu wadaa Maanta ay baaritaan sameeyaan Abaanduulayasha ammaanka Dowladda Kenya, kadib Weerarkii Suuqa Westgate.
Gudiggaan ayaa Baaritaan wada sameeynaya Abaanduulayasha ammaanka, baaritaankaas oo ku saabsan haddii ay jirtay in Sirdoonka Kenya uu ku guuldareystay weerarkii ay maleeshiyaadka ku qaadeen xarunta laga dukaameysto ee Westgate.
Gudigga difaaca ayaa sidoo kale baari doona Howlgalkii Socday Afar Maalmood iyo sida ay Dowladda u maamushay Howlgalkaani.
Baarlamaanka Kenya ayaa si kulul u dhaliiyay hay'adaha Ammaanka kadib weerarkii lagu hoobtay ee Westgate.
Sabtidii hore ayay Koox hubeeysan oo al-Shabaab ah waxa ay xoog ku galeen suuq heerkiisu sarreeyo ee laga dukaameeysto, waxa ay si aan kala sooc lahayn rasaas ugu fureen dadkii adeeganayay iyagoo sidoo kalena bam-gacmeed ku tuurayay dad tira badan oo rayid ah oo aan waxba galabsan. Kadib is horfadhi socday afar maalmood, ayay raggii hubeeysnaa waxa ay dileen ugu yaraan 72 qof iyaga oo tiro aan la garanayn oo dad ahna u qabsaday la haysta ahaan illaa iyo intii ciidamada ammaanka Kenya ay xaaladda gacanta ku dhigeen Talaadadii.
Bishii August, ciidamada ammaanku waxa ay Kenya ka soo saareen digniin aragaggixiso, iyaga oo sheegay in ay xogo sirdoon ku heleen in ugu yaraan shan howl-fuliye oo al-Shabaab ah ay Mombasa ka soo galeen dhinaca Soomaaliya lagana yaabo in ay qorsheeynayaan weerar lagu beego sannad-guuradii koowaad ee dilkii wadaadkii xagjirka ahaa ee Aboud Rogo Mohammed.